YouTube na-ebuputa uzo abuo ka ịga n’iru ma obu azu | Gam akporosis
Nwere ike ịpị YouTube ugboro abụọ iji gaa 10 sekọnd n'ihu ma ọ bụ azụ
Ahụmịhe onye ọrụ na ama dị oke mkpa na ọ bụ nke zuru oke ka ị wee nwee ike iji ngwa na ọrụ niile ahụ. Ngwa ndị ahụ chọkwara nke ahụ nye ihe omuma kacha mma ma bụrụ nke kachasị nke ọma iji chekwaa usoro na igbu oge maka onye ọrụ chọrọ ịrụ ọrụ X na obere oge enwere ike.
YouTube, dika ọtụtụ ngwa Google ndị ọzọ, na-aga n'ihu na-emewanye nke nta nke nta, na mmelite ndị gara aga ọ tinyela ụfọdụ nkọwa ndị pụtara ìhè. Naanị ihe na - eme bụ na etinyebeghị nkọwa ndị a na mpaghara niile, dịka ọ dị na ya Pịa ugboro abụọ ka ị gaa n’ihu ma ọ bụ azụ mgbe ị na-egwu vidio. Site taa ọ dị maka onye ọ bụla na YouTube.
Njirimara a na - enye gị ohere ịpị aka abụọ n’otu akụkụ gaa n'ihu ma ọ bụ azụ maka naanị 10 sekọnd. Azọ dị mfe ma dị ngwa iji kwughachi oge ahụ nke nkuzi vidio ị na-egwu ma ọ bụ nke ịgba egwu nke ọkacha mmasị gị kachasị amasị gị nke ị chọrọ iburu n'isi wee kwughachi ya n'onwe gị na vidiyo ị ga-ebugo na YouTube.
Ọ bụ otu n'ime nkọwa ndị ahụ n'ikpeazụ tinye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ mgbe ị maara ha, dị ka ọ na-eme na pịa abụọ na mebere igodo nke ngwa ndị na-adịbeghị anya nke na-akpọrọ gị na ngwa ikpeazụ mepere emepe, yabụ ị nwere ike ịgbanwe site na ibe gaa na ngwa ngwa.
Ọrụ ọhụrụ a adịgo oge a na-anwale site na YouTube, ma o mechara bụrụ otu afọ na ọnwa ole na ole ka e mere ya eze. Enwere m ya ugbua na-arụ ọrụ na ekwentị m, yabụ egbula oge ịnwale ya iji nweta ọtụtụ ihe na mkpanaka gị yana ịkwesighi ikwenye na usoro iheomume nke ịrụ ọrụ na YouTube.
Agbanyeghị, gaba ebe a maka APK kacha ọhụrụ na YouTube naanị ọ bụrụ na.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwere ike ịpị YouTube ugboro abụọ iji gaa 10 sekọnd n'ihu ma ọ bụ azụ
Otu esi eme ka Samsung Galaxy S7 dị na Samsung
Samsung's Chromebook Pro ga-abata na 16 GB nke Ram